U-Ian Gomez Ujoyine i-Cast ye-Apple entsha ye-TV + Uthotho "Lokwenyama" | Ndisuka mac
Kubonakala ngathi ngoku Apple TV + Inemfashini e-US kwaye nawuphi na umlingisi ofanele ityuwa yakhe ufuna ukuvela kuthotho okanye kwimuvi kwiqonga lika-Apple. Nokuba kunjalo, okanye kukuba i-accountant ye-Apple ihambile kwaye ayiyeki ukukhupha iitsheki zesisa (kule mihla yokuhambisa) ukuba ube nengqokelela yezitikha oza kuyibonisa xa ukhangela i-Apple TV + iimenyu.
Inyani yile yokuba umdlali weqonga owaziwayo waseMelika, u-Ian Gomez, naye uye wanikezela kumakhubalo e-Cupertino dollar kwaye uzakuvela kuthotho olutsha oludutyulwa kwi-Apple TV + «Zemvelo«.
Uthotho "Lokwenyama" bekuyimveliso yeApple TV + kangangexesha elithile. Okwangoku ikwisigaba sokufota, kwaye kubonakala ngathi iza kukhutshwa kweli hlobo. Nangona kusekho abadlali abajoyina iqela labadlali.
Ngokwenqaku elipapashwe namhlanje ngu Umhla wokugqibela, UIan Gómez, umdlali odumileyo osuka kuthothoIdolophu yaseCougar»Ujoyine iqela labadlali abaza kudlala kolu thotho lutsha« Ngokwasemzimbeni ». Ujoyina iRose Byrne esele isaziwa (Umonakalo, uSapho olukhawulezileyo) kunye noRory Scovell (iNdlu).
U-Gomez uza kudlala umlinganiswa ogama lingu-A Ernie. Ngokwengxelo, u-Ernie "nguvulindlela wetekhnoloji ophumelele ibhaso eliphambili kolunye lwezixhobo zakhe." Kwaye wabulela kuloo nto, wangena kwezopolitiko zesixeko sakhe.
"Ngokwasemzimbeni" ngumdlalo odibeneyo womdlalo weqonga kunye nohlekisayo. Iziqendu ezilishumi zemizuzu engama-30 ezenza ixesha lokuqala ziyadutyulwa. Olu luhlu luya kulandela isimilo sikaByrne, uSheila, njengoko exhasa umyeni wakhe (uScovell) ngokusebenzela usodolophu wesixeko sabo.
Kwangoko kulo nyaka, uApple uqinisekisile ukuba "uMzimba" uya kukhutshwa kweli hlobo, ngaphandle komhla othile wokukhutshwa. Siza kulinda usuku lwayo lokuvula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » U-Ian Gomez ujoyine abadlali be-Apple TV + entsha "yePhysical"
I-MacBook Pro ye-intshi ye-13 ye-intshi ye-2012 ngoku ayisasebenzi